16 Waxyaabood Oo Aad Sameyso Oo Burburiya Xiriirkaaga (Iska Ilaali) - Aayaha
Aayaha editorNovember 26, 2018
Haddii aad rabtid in xiriirkaaga uu noqdo mid hore u socda, waxyaabahan waa inaad iska ilaalisaa.
1. Xiriirkaaga waa baabi’say markaad mudnaanta siin seygaaga/xaaskaaga.
2. Waad dishay xiriirka markaad cafin weyso xaaskaaga/seygaaga oo qalad galay.
3. Waad baabi’isay xiriirka markaad saaxiibadaa lamaankaaga ka dooratid. Lamaankaaga/lamaantaada waa inay koow noqotaa mar kasta.
4. Waa dishay xiriirka markaadan sameyn waqti aad kula xiriirto lamaankaaga/ xaaskaaga si joogta ah.
5. Waa dishay xiriirka markaad lamaankaaga ka filato inuu aqriyo maskaxdaada isla markaana aad rabto inuu ogaado waxa ku dhibaya ama walwalka kugu haayo.
6.Waa dishay xiriirka markaad dhaleeceysid lamaankaaga.
7. Waa dishay xiriirka markaad lamaankaaga ka filato wax xad dhaaf ah. Lamaankaaga wuxuu dareemi doonaa niyad jab.
8. Waa dishay xriirka markaad had iyo jeer ilaalisid lamaankaaga, noqoshada qof ninkeeda ilaalisa uma wanaagsana xiriirka & guurka.
9. Waa burburisay xiriirka markaad xaqiiqda ka qarisid lamaankaaga. Xirir aan daacadnimo ku dhisneyn waa burburaa.
10. Waa burburisay xiriirka markaad had iyo jeer eed dusha ka saartid lamaankaaga. Dhibaato ma xalin kartid hadaad ku fadhilanto qaadashada masuuliyadda qeybta aad qaladka ku lahayd intaad dusha kawada saari lahayd.
11. Waad burburisay xiriirkaaga markaad si isdaba joog ah u qeyliso. Qeylada way burburisaa guurka.
12. Waad baabi’isay guurkaaga markaad waqti badan ku bixiso taleefankaaga isla markaana aad dacaayadeyso lamaankaaga.
13. Waad dishay xriirka markuu maseeyr xadka kaa saaro. Maseerka caafimaad maahan waana dilaaga guurka.
14.Waad dishay xiriirka markaad nacdo saaxiibada lamaankaaga ama qoyskiisa. Xiriirkaaga gabalkiisa ayaa sii dhacaya markaad taas sameyso haddii aadan jecleyn qoyskiisa iyo saaxiibadiis aa inaadan nacayb u muujin.
15. Waad dishay xiriirka markaad lamaankaaga la meel dhigto nin ama naag aad hore u kala tagteen.
16. Waad burburisay xiriirka markaad had iyo jeer ka mashquusho waqti la qaadashada seygaaga/xaaskaaga. Naftaada waxaad bartay inay kaligeed noolaato markaad ka mashquusho waqti la qaadashada xaaskaaga/seygaaga.
Dhaqamada Guud Ee Keena Furriinka Iyo Kala Taga Lamaanayaasha
Talo Iyo Tusaaleyn – Lamaanaha Baraha Bulshada Ka Soo Muuqda
UGAAR AH DUMARKA: Haddii Ninkaaga uu leeyahay Shantaan sifo, Waxaad heysataa Ninka ugu wnaaagsan Dunida
Saddexdaan arrimood hadaad ku aragto wiil ama gabar aad guur ku ballanteen, mar labaad ka feker